Man United oo mid ka mid ah xiddigaha PSG u sameysay ballan qaad weyn si uu ugu soo biiro – Gool FM
(Manchester) 03 Maaajo 2020. Manchester United ayaa ka mid ah kooxaha Ingiriiska ka dhisan kuwaas oo si aad ah ugu mashquulsan bartilmaameedsiga saxiixyadooda suuqa xagaaga.
Red Devils ayaa lagu soo warramayaa inay hadda diiradda saareyso sidii ay Edinson Cavani kaga dhaadhicin lahaayeen usoo dhaqaaqista garoonka Old Trafford.
Maadaama qandaraaska Cavani uu kula jiro Paris Saint-Germain uu dhici doono bartamaha sanadkan, waxaa iska cad in bilaash lagu heli karo, balse kooxda Ingiriiska ka dhisan ayaa diyaar u ah inay weeraryahanka reer Uruguay ka mid dhigaan xiddigaha ugu mushaharka badan horyaalka Premier League.
Kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Atletico Madrid iyo Newcastle United ayaa lala xiriirinayaa gool dhaliyaha ugu sarreeya taariikhda PSG, kaasoo 200 gool u dhaliyay kooxdiisa dhammaan tartamada.
Manchester United ayaa dhowaanahan xiiso u muujineysay 33-jirkan sida laga soo xiganayo Todofichajes, waxaana kooxda 20-ka jeer hanatay horyaalka Ingiriiska ay diyaarineysaa qandaraas qaali ah si ay kaga dhaadhiciyaan inuu dhankooda u soo wareego.
Wararka ayaa sidoo kale sheegeya in kooxda uu hoggaamiyo Macallin Ole Gunnar Solskjaer ay horraan la xiriirtay wakiilka Cavani, sidoo kalena la rajeynayo in toddobaadyada soo aaddan ay gaaraan heshiis shaqsiyadeed.
Weeraryahankan ayaa ku dhibtooday xilli ciyaareedkan inuu helo booskiisa joogtada ee Parc des Princess, sidaas oo ay tahay waxa uu dhaliyay toddobo 22 kulan oo uu u ciyaaray kooxda ku guuleysatay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1.